Kuch Kuch Hota Hai(1998)(မြန်မာစာတန်းထိုး) – Channel Myanmar
မိတဆိုးသမီးလေးတစ်ယောက် ဖခင်အပေါ်ကိုပဲအားလုံးမှီခိုထားရတယ် မိခင်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံအချို့ပဲသမီးအတွက်ကျန်ခဲ့တယ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျောင်းကျပန်းစကားပြောပြိုင်မွဲမှာသမီးလေး
ကျတဲ့ခေါင်းစဉ်က “အမေ” တဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကိုကိုင်ရင်း လက်တွေတဆတ်ဆတ်တုန် မျက်လုံးနဲ့ပြောနေတဲ့စကားက အမေအကြောင်းသမီးမသိပါဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေသယောင်ပုံဖော်နေတယ်
ကံကောင်းတာတစ်ခုက ၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အမေထားခဲ့တဲ့စာလေးဖတ်လိုက်ရတယ်
စာထဲမှာရေးထားတာက ” အန်ဂျလီဆိုတာ တကယ်တော့သမီးရဲ့နာမည်အရင်းဖြစ်သလို သမီးအဖေသိပ်ချစ် ရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့”စာလေးထဲမှာ အတိတ်ကအကြောင်းတွေအများကြီးရေးထားတယ် ကျောင်းတက်စဉ်ငယ်ဘ၀တုန်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာအရမ်းခင်ရတဲ့ ယောက်ျားလေးဆန်ဆန်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတို့ဘ၀လေးထဲကို
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ညင်ညင်သာသာလေးဝင်လာခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ထိချက်ကတော့ အတော်ပျင်းတယ် ယောင်္ကျားလေးဆန်ဆန်ကောင်မလေးက နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကိုတောင်မဖြေပဲ အပြီးအပိုင်ဇာတ်မြှုတ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ် အဲ့ဒီယောက်ျားရှာကောင်မလေးရဲ့နာမည်က ” အန်ဂျလီ”တဲ့ ဆုံးသွားတဲ့မိခင်က သမီးကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒဘာတွေရေးခဲ့လဲသမီးလေးကရော အမေ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ့မလား ဖခင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ရှာရွတ်ခန်းကရော ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲ….
နောက်ဆုံးမှာ ရှာရွတ်ခန်း ကာဂျိုးနဲ့ ရာနီမူခါဂျီတို့ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပြီး
ယခုဇတ်ကားက ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ သို့ပေမဲ့ နှစ်ချို့ဝိုင်လိုအစွမ်းထက်နေတုန်းပါပဲ
ကဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ နှစ်ချို့ဝိုင်လေးသောက်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုရင်း……….
(အညွှန်းရေးသူကတော့ Phyo Pyae ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်သူကတော့ Moe Zin ပဲဖြစ်ပါတယ်)
File Size >>> 1.2 Gb
Quality >>> 720p Blurayrip
Duration >>>3hr
Encoder >>> AP Newschool
Subtitle >>> MyanmarSub
Download or Watch from pcloud (1.2 Gb)
Small File Download(700Mb)
Chief of Staff (2019 1
AMZN WEB-DL 720p
We are Not Married (1952)
Max (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Mata Batin(2017) 2017
Green Chair-Love Conceptually (2013) (18+)
Kick Ass Girls(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Piku (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Rango (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Seeking Justice (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hellboy (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Lost Future (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Trust (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Happy Ghost2( 1985 ) 1985
Last Seen in Idaho (2018) 2016